वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहोस् -
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहोस्
१५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार २१:३९ February 27, 2020 Kanchanpur KhabarLeaveaComment on वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहोस्
तपाई‌ं वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहोस् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको नवीकरण गरेको छ ।
तपाईं स्वास्थ्य परीक्षण गर्न गइरहेको मेडिकल सरकारले तोकेको सूचीभित्र नपरेको पनि हुनसक्छ । त्यही भएर सूचीभित्र परेको छ कि छैन, बुझेर मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहोस् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन कार्यविधि, २०७२ अनुसार तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरु मात्र सूचीकृत भएका हुन् ।
पहिले २५९ स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । तर नवीकरणपछि ३४ स्वास्थ्य संस्था सूचीबाट हटेका छन् । अब २२५ स्वास्थ्य संस्थाले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भएका छन् ।
धनगढीमा शैक्षिक मेला हुने
९ चैत्र २०७६, आईतवार १५:२४ March 22, 2020 Kanchanpur Khabar
कोरोनाभाइरस : दक्षिण कोरियामा नेपालीलाई सावधानी अपनाउन दूतावासको आग्रह
१४ फाल्गुन २०७६, बुधबार १७:४७ February 26, 2020 Kanchanpur Khabar
११ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०९:२४ May 24, 2020 Kanchanpur Khabar